Indlu yokugezela endlini (noma indlu) yilawo gumbi, elibhekene nombuso osebenza ngokuqondile. I-condensate, ngenxa yokushintsha kwezinga lokushisa, ukuphahlazeka kwamanzi, amanzi aphelile ngengozi - zonke lezi zinto zivivinya njalo futhi zivivinya ngendlela ehlelekile ukwakhiwa kwezindonga kanye nesitezi samandla, zingene emigqumeni yezobuchwepheshe.
Amanzi, ukuqoqa ezindaweni zokuqhutshwa kwezakhiwo ngaphansi kwe-tile, ezindaweni zokuxhumana nokuhamba kwamapayipi, enza izimo ezikhululekile kakhulu zokuhlala nokukhiqizwa kwamakholoni wonke we-fungi namagciwane. Imiphumela yesikhathi eside yalaba "abaqashi" yizindonga ezonakalisiwe kanye nokufakwe kwendawo, ukufaka ubuthi ngamabhomu. Ukuze ugweme konke lokhu okuphazamisayo, kanye nokuvinjelwa okudingekayo kwamanzi okugezela ngaphansi kwe-tile. Yini engcono kakhulu kulezi zinhloso? Kuyafaneleka ukucabanga ngakho.
Izinto ezithandwa kakhulu
Amanzi anamandla amakhulu. Futhi, mhlawumbe, kungakanani abantu abakhona, njengoba nje kuphikisana nesakhi samanzi. Okwamanje, kunezinto ezihlukahlukene zokuvimbela ukungena kwamanzi. Izinhlobo zamathengi ezifunwa kakhulu zinikezwa ngezansi:
- amapuleti, amapaneli wokwakha ungqimba olwehliswa ngamanzi;
- izinto eziguquguqukayo ezingasuswa noma zihlanganiswe;
- Izinto zokudweba nezinhlanganisela ezinamathele zokugqoka (izindonga kanye nokuphathwa ngezansi ngale ndlela zihlanganiswe ngendwangu yokuvimbela ukungena kwamanzi kuze kube ngu-1.5 cm ubukhulu);
- okufakwe efomini ifomu le-foam-samente noma izithiyo zepulasitiki zamapulasitiki;
- ukuvalwa kwamanzi okuphazamisa okukhethekile, futhi ngesikhathi esifanayo nokulinganisa izakhiwo eziqondile;
- izinto ezigcwele izingxenye ze-hydrophobic nokuqinisa i-fiber;
- ukufakwa kwemithi kanye nokujova, okukwazi ukuguqula isakhiwo sezinto ezivuthayo (okuwumphumela - ukuqinisa izakhiwo namanzi amandla).
Kuye ngezici zobuchwepheshe ekamelweni lapho umsebenzi ozokwenziwa khona, khetha uhlobo lunye, futhi mhlawumbe ababili basebenze ngokugcwele ngezinto zokwakha. Kwenzeka kunzima kakhulu (ikakhulukazi hhayi ochwepheshe) ukunquma ngezinketho ezixazulula kahle umsebenzi wokuvimbela ukungena kwamanzi endlini yokugezela. Nokho, umuntu kumele agcine engqondweni lokhu okulandelayo:
- Ukuvikelwa komswakama kwezakhiwo zangasese endlini akudingi ukuvimbela amanzi okufanayo njengesizinda sesakhiwo;
- Omunye kufanele akhumbule ukuthi uma kwenzeka ukuvalwa kwamanzi kwebhabha ngokwakho, ubuchwepheshe abufanele kube nzima kakhulu;
- Intengo yenkinga nayo ibalulekile, ngoba ukuthengwa kwempahla kungabiza kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nazo zonke lezi zinto, njengombuso, kungaphetha ngokuthi eyamukelekayo kakhulu ukungena kwamanzi indlu yokugezela kanye nokugezela kuyoba ukugqoka nokugcoba. Ukwenza lezi zinhlobo zomsebenzi namuhla, izinto eziningi ezihlukene kanye nemikhiqizo eqediwe ikhiqizwa, okungafani nokwakhiwa, intengo nobuchwepheshe.
Incazelo yokusebenza ngaphambili
Kunezinketho eziningi zokwenza umsebenzi ongenawo amanzi emakamelweni angcolile. Azikho ngaphansi kwezinto eziziwa futhi ezitholakalayo namuhla, ngosizo lokuvimbela ukungena kwamanzi ngaphansi kwe-tile. Yikuphi okungcono, yini engingayithanda?
Kunezici ezintathu eziyisisekelo ezikhomba izindawo zokusebenza kanye nendawo yokucubungula okuzayo. Esigumbini sokugezela emiphumeleni emonakalo yamanzi ingavikelwa:
- kuphela indawo enezingqimba (phansi), okwakhiwa ngempela izindonga ezincane (≈ 10 cm) eceleni kwezindonga;
- phansi kanye nezindawo ezungeze imishini yokuhlanza (ukugeza, ukugeza, izitsha zokugeza, njll);
- phansi kanye nezindonga ngokuphelele, ngokucubungulwa kwama-partitions kuhlanganise nokuphakama.
Isidingo sokungena ngaphambi kokunikeza uhlobo oluthile lokuvimbela ukungena kwamanzi luhlobene nendlela okuyokwenziwa ngayo isivinini esiphezu kwamanzi. Izinto ezifanayo zingasetshenziswa ngokuhluke ngokuphelele ebusweni ngokuzenzekelayo.
Ukuvinjelwa kwamanzi ngokugqoka
Lolu hlobo lokuvimbela ukungena kwamanzi luyisigxobo esisodwa noma sezingqimba eziningana nobubanzi obuyi-1 mm kuya kwamamitha amaningana, okudalwe ngokusebenzisa i-plastic compound ebusweni evikelwe emanzini.
Uma ibhuku lingenwa amanzi, lezi zindlela ezilandelayo ziyasetshenziswa:
- I-Paint, eyenza ifilimu encane yokuzivikela ebusweni: ihlanjululwe ku-bitumen egazini, uhlobo olufanayo lwe-mastic, amakhemikhali ahlanzekile amanzi okucubungula izinkuni nezakhiwo zensimbi (ama-varnishes, amapende). Ezindaweni eziqondile izinto ezifana nalezi zisebenza emigqeni emibili ngebhashi noma i-roller. Ngaphansi, ukwakheka kumane kuthule futhi kuhanjiswe ngokulinganayo nge-squeegee-squeegee.
- Ama-mastic ama-Bituminous, ama-stick-like-like afana nesisekelo se-bitumen ene-oxidized ne-add of additives eguquguqukayo, ukunciphisa utshwala nokukhula okunamandla nezici zamandla.
Ukuvimbelwa kwamanzi okungaphezu kwamanzi, okwakhiwa okuqhubekayo okungekho emhlabathini okumele kuphathwe, kufanele kukhethwe kulawo mathuba lapho indlu yokugezela idinga ukugcwaliswa kwesibhamu.
Izimiso eziyisisekelo zokugqoka
Okokuqala udinga ukususa yonke imfucuza yokwakha uphinde uhlanze ubuso obudala, ukugqoka okusetshenziswe ngaphambili, i-varnishes, amapende kanye namafutha, ukulungisa yonke imonakalo ekhona. Ngaphezu kwalokho, kunesidingo sokwandisa okungenani u-2 cm wonke amalunga ama-plates, amapaneli, imigqa yesikhombimsebenzisi sezindonga nokufakwa. Uqedile ama-shtroby angama-longitudinal degreased, futhi afakwa intambo yokubamba amanzi emzimbeni wokuzibopha (i-floating floating in the bathroom nayo iqhutshwa). Ngaphezu kwalokho, ngokwemiyalo yomyalelo, itekisi ekhethiwe yokugcizelela ihlanganiswe phezu kwentambo . Isigaba esilandelayo empeleni ukumbozwa kwezindawo ezihlelwe ukucubungula. Le nqubo iphela ngokufaka i-plastering ngenhloso yokwehlisa nokuthulula isikrini.
Insimu yokuvimbela amanzi ivumelekile ukuba ithathe isikhundla sesisindo se-silicone, ehlanganiswe kuma-tubes. Inqubo yokugcwalisa i-silicones nge-silicone kufanele iqhubeke njalo, okwenziwe ngokweqile kunqunywa nge-spatula.
Ukuvimbela amanzi ngokugcoba
Ukuvimbela ukungena kwamanzi kungabizwa noma yikuphi ukumbozwa okungenawo amanzi, okuvela ezintweni eziningana zezinto ezikhethekile (ifilimu, amashidi, imiqulu) nokusetshenziswa kwezici ezikhethekile zeglue. Ukufakwa kwanoma yiziphi izinto zokuvimbela ukungena kwamanzi kuyadingeka ukuze uthole ukuvinjelwa kwamanzi okugezelayo ngaphansi kwe-tile.
Yini engcono ukukhetha njengento yokugcoba? Ngokuvamile sebenzisa indlela endala yokushisa emaphethelweni wezinto okumele zihlanganiswe kanye nomshini wegesi. Noma kunjalo, lokhu akuphephile kakhulu.
Ngokuphambene nalokho, imakethe yanamuhla igcwele izinhlobo ezahlukene zezinhlanganisela zeglue. Kukhona ngisho nalawo angadingi ukushisa ngaphambi kokusetshenziswa. Enye ye-newest yi-polyurethane mastic "Unihex-2". Wonke ubuchwepheshe bokupheka uhlanganisa ukuxuba izingxenye ezimbili futhi - i-glue ilungele ukusetshenziswa. Ukusebenzisa i-spatula, isetshenziselwa ekugcineni kwekhasi, futhi ishidi elilandelayo lokugqoka ligqashelwe. Le-adhesive nayo inezindawo ze-sealant.
Izinzuzo nokuqeda ukunamathela
Ngaphambi kokwenza ukungena kwamanzi endlini yokugezela ngokugcoba, kudingeka uhlole izici ezinhle nezimbi zale nqubo. Yiqiniso, ohlangothini olukhangayo yinani lebhajethi. Emaphuzu angalungile, kubalulekile ukulalela iqiniso lokuthi kuyadingeka ukwenza izilinganiso zokuqala bese ukusika izinto.
Ngaphezu kwalokho, indawo evikelekile akufanele ibe nokuhlukana okukhulu ekuphakameni - kuvunyelwe 2 mm ngamamitha amabili ubude. Ukuze kusetshenziswe inguquko, ukusetshenziswa komshini kuyodingeka, futhi umsebenzi uzoba nzima kakhulu, ngoba izindawo zokugeza zihlala endaweni encane. Ngaphezu kwakho konke okushiwo ngenhla, kufanele kuqashelwe ukuthi ukubeka phansi kwe-webs impahla kanye nokulungiswa okuphelele kwamakona kunenqubo enzima kakhulu. Ukungabi namakhono afanele, izinto zokuvimbela ukungena kwamanzi zingagxiliswa yi-burner noma izinyembezi uma wenza ikhoneni.
Yini esebenzayo okudingeka yenziwe ngaphambi kokungena kwamanzi kwindlu yokugezela ngaphansi kwe-tile? Kungcono ukwenza konke wena noma ukumema inkosi? Ngokwemvelo, uma unamakhono, kuyoba eshibhile ukwenza konke ngokwakho.
Ngaphambi kokuqala, ukuqhuma kuyasuswa futhi ukuma okuphelele kwe-screed ne-plaster kulindeleke. Okulandelayo, susa zonke izinhlayiya (uthuli, injini, njll) futhi uhlanganise kabili ubuso nomhlabathi. Khona-ke, zonke izintambo ze-butt azivimbela amanzi futhi, uma kudingeka, zisebenzisa i-mastic noma i-polymer glue. Sika izinto ngokuya ngezilinganiso zokuqala bese uzivumela ukuba zilale okungenani amahora angu-24.
Khona-ke ungaqala inqubo yokugcoba. Ishidi lokuqala lihlanganisiwe njengelungele inkosi. Kusuka kuphi indawo ozoqala umsebenzi, akunandaba. Emaphethelweni wekhasi ngalinye elilandelayo liboshwe nge-glue futhi liqoqa (alikho ngaphezu kuka-20 cm) eshadini langaphambilini. Emva kokuphela kwesendlalelo sokuqala, izinhlangothi zakhiwa ukuvikela izindawo zokugezela, ukugeza, ukucwilisa, njll. Ukuvinjelwa kwamanzi ezindongeni kuhlanganiswe kusuka phezulu. Imidwebo yesigcawu sesibili sokuvimbela ukungena kwamanzi ihlanganisiwe ngaphesheya kwesinye esidlule.
Ukuvimbela ukungena kwamanzi ezindaweni zangasese
Ukuvimbela ukugezela amanzi endlini yangasese kunamakhasimende akhe. Umuthi ngamanzi "awunobungane", futhi uma kungenjalo ukuthi ungayinakekeli ukungena kwamanzi, isikhunta sizovela ngokushesha endlini yokugezela, imininingwane yangaphakathi yokhuni izophoqeka futhi ngokushesha ibe yize.
Kusukela phansi kwezindlu zenziwe ngamapulangwe, kubalulekile ukuba unakekele ukwelashwa kwabo ngamagciwane okuvimbela amanzi. Futhi kuyadingeka ukuba ukhumbule ukucubungula kokucophelela kwelayili, lapho, uma kukhishwa, umfudumala oshisayo uhlala ngendlela yamaconsi amanzi.
Ukuvimbela ukungena kwamanzi kusebenza ezindlini zamapulangwe, izambatho ezikhethiwe zokugaya amanzi ezivame ukuvame ukusetshenziselwa, okuvikela ngokucophelela izinkuni zemvelo kusuka ekuthuthukiseni.
Ngokuqondene nokutshala izimali, ngokuqinisekile kuzuzisa kakhulu ukuthenga nokusebenzisa ngesikhathi sokulungisa, ukugqoka izinto zokuvimbela ukungena kwamanzi, intengo engaphansi kakhulu kune-oklechnye. Isibonelo, iphakheji le-15 kg ye-bitumen insulation mastic izodala umthengi ama-ruble angu-240-250. Uma sikhumbula ukuthi ukufakwa koqweqwe lwamanzi okungamanzi 2 mm obukhulu, 3.2 kg wezinto nge sq. Ingqikithi, kucacile ukuthi le ndlela inomnotho kakhulu. Futhi uma ucabanga ukuthi umsebenzi ungenziwa ngokuzimela, okuhle, akukho amakhono akhethekile okudingekayo futhi onguchwepheshe angeke amenywe (futhi hhayi ukukhokha imali eyengeziwe), khona-ke kusukela ekubukeni kokutshalwa kwemali le ndlela yokuvimbela ukungena kwamanzi ibheka okungaphezu kokukhangayo.
Ungathenga i-mastic ngezici ezithuthukisiwe, ezifaka izinto zenkampani "Technonikol". Ukufaka i-20 kg kuzodala umthengi ku-1200 - 1300 ruble. Izindleko ezinjalo ngeke ziholele ekuhluphekeni kwemali kuyo yonke imindeni eyodwa, futhi indlu yokugezela izovikelwa ngokuthembekile ekuvukeni nokukhukhula.
Ingabe kukhona okunye?
I-classic version ye-tiled floor endlini yokugezela yinto eyedlule. Namuhla, ukugqoka kwanamuhla njengobuningi noma i-3D phansi, izambatho zokulwa nezigqoko "Iphepheni leMatshe" ziyadingeka kakhulu.
Zonke lezi zindawo ngokwazo zimelela izinto zokuvikela ukungena kwamanzi okuhle, izindawo (amanzi aphikisayo) zazo eziqinisekiswa ngesakhiwo sabo namandla. Kodwa-ke, ilungiselelo lokugqoka okunjalo lizodinga izimali ezinkulu kakhulu zezezimali. Uma kukhona, konke kulungile - ungakha umklamo wokugcina endlini yokugezela. Uma kungenjalo, i-tile endala yomusa phansi nasezindongeni kuyodala isimo sobuzwela nokududuzeka.
Eagle. Kokubona edolobheni elidala